Qarax Galabta ka Dhacay Wadada Maka Al-Mukarama Ee Muqdisho.(Sawirro) - Awdal Media
Inta la xaqiijiyey labo ruux ayaa ku dhaawacmay gaari ay la socdeen oo qarxay waqti uu marayey galabta wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in meel aan ka fogeyn Saldhiga degmada Waaberi uu ku qarxay gaarigan oo noociisu ahaa nooca laba shireyda ah ee Soomaalidu u taqaano qooqan.
Labada qof ee ku dhaawacmay qaraxan oo ahaa dad shacab ah ayaa loola cararay goobaha Caafimaadka ee magaalada Muqdisho. lamana oga waxay ahaayeen.
Qaraxa ayaa ahaa gaariga loogu xiray dadkii watay ayaan la ogeyn waxay ahaayeen iyo sababta keentay in gaarigooda qarax lagu soo xiro.
Gaariga qaraxa lagu soo xiray oo weli goobta yaalla ayaaney waxyeelo weyn soo gaarin, marka la eego qaraxyadii la midka ahaa ee horey u dhacay, iyadoo qaraxan uu ahaa mid aan sidaa u weyneyn.